ဘယျလိုလူမြိုးကိုလိုခငျြသလဲဆို ကိုယျ့မကျြနှာတဈခကျြအညှိုးမခံမယျ့သူမြိုးကိုပါ - ONE DAILY MEDIA
လူတိုငျးဟာ ကိုယျ့အပျေါကောငျးမယျ့သူ ကွငျနာမယျ့သူနှေးထှေးမယျ့သူကိုပဲလိုခငျြကွတာ။ ခဈြတယျလို့ပွောပွီးမနှေးထှေးပေးနိုငျတဲ့ သူမြိုးကိုတော့ဘယျသူကမှမလိုခငျြကွပါဘူး။ အခဈြဆိုတာ အမွဲပြျောရှငျနနေိုငျမှာမဟုတျတောငျ ပြျောရှငျရတဲ့အခြိနျတိုငျးမှာသူ့ကွောငျ့ဆိုတဲ့ ခံစားမှုမြိုးခံစားမိအောငျလုပျပေးနိုငျမယျ့။ သူမြိုးကိုသာလိုခငျြတပျမကျမိကွမှာပါပဲ။
ကိုယျ့ကိုအမွဲငိုအောငျလုပျတဲ့သူထကျ ကိုယျ့ကိုပြျောရှငျအောငျလုပျပေးနိုငျတဲ့ သူမြိုးကိုပိုပွီးလိုအပျကွတယျ။ ပြျောရှငျမှုဆိုတာဟာလညျးသူပေးနိုငျတဲ့ တနျဖိုးကွီးပစ်စညျးတှကေိုဆိုလိုတာမဟုတျဘဲ သူ့ရငျထဲကလာတဲ့ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှပေါပဲ။ တောငျးစရာမလိုပါဘဲ သူ့ဘကျကလိုလိုလားလား ပေးလာတဲ့ဂရုစိုကျမှုလေးတှဟောတနျဖိုး ဖွတျမရအောငျအဖိုးတနျလှနျးပါတယျ။
ခဈြတယျဆိုတာကိုပဲကွားခငျြတာမဟုတျပါဘူး။ ခဈြတယျဆိုတာကိုသကျသပွေတာကိုလိုခငျြတာ။ နှေးထှေးပေးတာမြိုးအလေးထားတာမြိုး ကွငျကွငျနာနာရှိနပေေးတာမြိုးပေါ့။ ဘယျအခြိနျမဆိုတောငျးပနျဖို့ ဝနျမလေးတဲ့သူမြိုးပေါ့။ လုပျခငျြရာလုပျပွီးတောငျးပနျတဲ့သူမြိုးမဟုတျပါဘဲ ကိုယျ့အပျေါဘာမှားမှနျးမသိတောငျ ကိုယျ့မကျြနှာညှိုးငယျသှားတာနဲ့ အတငျးတောငျးပနျနတေတျတာမြိုးပေါ့။
အခဈြဆိုတာခဈြနရေုံနဲ့မပွီးဘူး ခဈြတယျလို့ပွောလိုကျရုံနဲ့လညျးအဆငျမ​ပွဘေူး။ နားလညျမှုရှိဖို့လိုတယျ ကွငျနာတတျဖို့လိုတယျ။ ခဈြပွတတျဖို့လိုတယျ အလြှော့ပေးတတျဖို့လိုတယျ။
မငျးထကျကောငျးတဲ့သူတှရှေိနရေငျတောငျမှ မငျးကိုပဲရှေးခယျြမယျ။ မငျးမပေးနိုငျတဲ့အရာတှပေေးနိုငျတဲ့သူရှိတောငျ မငျးကိုပဲရှေးခယျြမယျ။ သခြောတယျမငျးလောကျဘယျသူ့မှ ငါ့အပျေါမခဈြနိုငျဘူး….
လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းမယ့်သူ ကြင်နာမယ့်သူနွေးထွေးမယ့်သူကိုပဲလိုချင်ကြတာ။ ချစ်တယ်လို့ပြောပြီးမနွေးထွေးပေးနိုင်တဲ့ သူမျိုးကိုတော့ဘယ်သူကမှမလိုချင်ကြပါဘူး။ အချစ်ဆိုတာ အမြဲပျော်ရွှင်နေနိုင်မှာမဟုတ်တောင် ပျော်ရွှင်ရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူ့ကြောင့်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုးခံစားမိအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ့်။ သူမျိုးကိုသာလိုချင်တပ်မက်မိကြမှာပါပဲ။
ကိုယ့်ကိုအမြဲငိုအောင်လုပ်တဲ့သူထက် ကိုယ့်ကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ သူမျိုးကိုပိုပြီးလိုအပ်ကြတယ်။ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဟာလည်းသူပေးနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲ သူ့ရင်ထဲကလာတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပါပဲ။ တောင်းစရာမလိုပါဘဲ သူ့ဘက်ကလိုလိုလားလား ပေးလာတဲ့ဂရုစိုက်မှုလေးတွေဟာတန်ဖိုး ဖြတ်မရအောင်အဖိုးတန်လွန်းပါတယ်။
ချစ်တယ်ဆိုတာကိုပဲကြားချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ချစ်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြတာကိုလိုချင်တာ။ နွေးထွေးပေးတာမျိုးအလေးထားတာမျိုး ကြင်ကြင်နာနာရှိနေပေးတာမျိုးပေါ့။ ဘယ်အချိန်မဆိုတောင်းပန်ဖို့ ဝန်မလေးတဲ့သူမျိုးပေါ့။ လုပ်ချင်ရာလုပ်ပြီးတောင်းပန်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပါဘဲ ကိုယ့်အပေါ်ဘာမှားမှန်းမသိတောင် ကိုယ့်မျက်နှာညှိုးငယ်သွားတာနဲ့ အတင်းတောင်းပန်နေတတ်တာမျိုးပေါ့။
အချစ်ဆိုတာချစ်နေရုံနဲ့မပြီးဘူး ချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရုံနဲ့လည်းအဆင်မ​ပြေဘူး။ နားလည်မှုရှိဖို့လိုတယ် ကြင်နာတတ်ဖို့လိုတယ်။ ချစ်ပြတတ်ဖို့လိုတယ် အလျှော့ပေးတတ်ဖို့လိုတယ်။
မင်းထက်ကောင်းတဲ့သူတွေရှိနေရင်တောင်မှ မင်းကိုပဲရွေးချယ်မယ်။ မင်းမပေးနိုင်တဲ့အရာတွေပေးနိုင်တဲ့သူရှိတောင် မင်းကိုပဲရွေးချယ်မယ်။ သေချာတယ်မင်းလောက်ဘယ်သူ့မှ ငါ့အပေါ်မချစ်နိုင်ဘူး….
ပွီးပွညျ့စုံသော Relationship တဈခုမှာ သာတယျနာတယျဆိုတာ မရှိဘူး